Aung Win Hein (Noble): March 2010
ဘာသာဘာဝ ပြောကြဆိုကြ သုံးနှုန်းကြတာက
(တော်တို့၊ ကျုပ်တို့)လို့ပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး သုံးကြတယ်။
မြို့မှာလို ရှင်တွေ၊ ကျမတွေ မသုံးနှုန်းကြဘူး။
မြို့မှာ တော်တွေ၊ ကျုပ်တွေ သုံးရင် ရိုင်းတယ်ပေါ့။
တောသူတောသား တွေလို့ ယူဆထားကြတာကိုး။
ဒီတော့ တောမှာ နေတဲ့တောသူမတစ်ယောက်ဟာ
မြို့သူမြို့သားရဲ့အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်တွေကို လေ့လာမေးမြန်းရတာပေါ့။
ဒါနဲ့ အဲဒီကျေးတောသူဟာ မြို့ကို သွားတော့ ရှင်ထည့်ပြီးပြောဆိုမှပဲ စိတ်ထဲမှာ စွဲထားလိုက်သတဲ့။
“ ကြုံးရုန်း ပြီး ထ..”
ပထမငယ်တန်းဝင်ဖြေတာ စာမေးပွဲကျလို့ တစ်ရက်၊နှစ်ရက်ဆက်ပြီးငိုနေခဲ့တယ်။
နောက်တော့ ဆရာသမားများက ဖျောင်းဖျသွန်သင်တဲ့အတိုင်း
မခံနိုင်စိတ်တွေ ပယ်ဖျောက် ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း သူဟာ သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့
အဲဒီဦးဇင်းငယ်ဟာ အခက်ဆုံးဆိုတဲ့ သကျသီဟ စာမေးပွဲကြီးမှာ
ဒါ့ပြင် ကျမ်းဂန်တွေ အများကြီးပြုစုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ပထမဆုံး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့ကို
သာသနာမှာ ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည်တွေဟာလည်း
ဒါဆိုရင် စာမေးပွဲကျတာ ဘာဆန်းလဲ?
ဆန်းတာကတော့ ကျရှုံးမှုအပေါ် တုန့်ပြန်မှုပါဘဲ။
အချို့ကတော့ ကျရှုံးမှုကို ယာယီသဘောထားကြတယ်။
နောက်ထပ် ကြုံးရုန်း ထပြီး အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရင်း ထိပ်တန်းရောက်သွားခဲ့တယ်။
အချို့ကတော့ ကျရှုံးမှုကို ထာဝရလို့ထင်မြင်ပြီး လုံးဝအလျှော့ပေးလိုက်ကြတယ်။
ဘယ်တော့မှ နလံမထူတော့ဘူး။ ဘဝမှာ စုန်စုန်မြှုပ်သွားတာပေါ့။
လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာလမ်းကို ရွေးချယ်ပါလေ။
“ အားနည်းချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်စမ်းပါ...”
တစ်ခါတုန်းက ရေထမ်းယောကျာ်းတစ်ယောက်မှာ ရေထမ်းပုံးနှစ်ပုံးရှိပါတယ်။
အဲဒီရေထမ်းပုံးနှစ်ပုံးကို ထမ်းပိုးမှာလျှိုပြီး ပခုံးနဲ့ထမ်းကာ
နောက်တစ်ပုံးကတော့ အောက်ဘက်ထောင့်မှာ အက်ကွဲရာတစ်ခုရှိနေတယ်။
တစ်ဖက်ကဂုဏ်တွေဝင့်နေတော့ ကျန်တစ်ဖက်က သံပုံးအကွဲက အလိုလို အားငယ်နေရတာပေါ့။
ကိုယ့်မှာကလည်း အားနည်းချက်ကရှိနေတာမို့ ရှက်လည်းရှက်နေရပါတယ်။
ကာလကကြာလာတော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ
ဒီလိုသာဆိုရင် သခင်ကြီး အခေါက်ရေများများသယ်စရာမလိုဘူးပေါ့။
သံပုံးလေးဟာ ပြောရင်းနဲ့အသံတိမ်ဝင်သွားပါတယ်။ ဆက်ပြောရင်…ငိုမိမှာအမှန်ပါပဲ။
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ဘာတွေထူးခြားသလဲဆိုတာသတိထားကြည့်ထား၊ ကြားလား?”
လမ်းတစ်ဖက်မှာ ရောင်စုံပန်းမျိုးစုံတွေဟာ ငွားငွားစွင့်စွင့် ပွင့်လို့နေပါတယ်။
အိမ်ရောက်တော့ ရေတစ်ဝက်ပဲပါတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။
သံပုံးအကောင်းဘက်မှာ ဘာပန်းမှ မရှိဘူးလေ၊
မင်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိလို့ ငါ ပန်းမျိုးစုံရဲ့မျိုးစေ့တွေကို မင်းဘက်ခြမ်းမှာ ကျဲခဲ့တယ်။
မင်းကြောင့်ဘုရား ပန်းလှလှ ပူဇော်နိုင်ခဲ့သလို
ပိုတဲ့ပန်းတွေကို ဈေးမှာရောင်းခဲ့လို့ ဝင်ငွေတွေလည်းတိုးခဲ့တာ
အိမ့်ကျက်သရေတိုးခဲ့သလို အိမ်ရဲ့ဝင်ငွေတိုးခဲ့တာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ?
လူတကာမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီရှိနေတတ်ပါတယ်။
အားနည်းချက်ကြောင့် အားငယ်၊ စိတ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်း ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲ?
အဲဒီအားနည်းချက်ကို အားသာချက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ပါ။
အားနည်းချက်ကို အားသာချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မခက်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သတိရှိအောင် သတိထားနေပေါ့။
ဉာဏ်ရှိလာရင် အားနည်းချက်တွေကို အားသာချက်ဖြစ်အောင်